Thelọ ọchịchịrị gbara ọchịchịrị nke okpokoro isi 40.000 | Akụkọ Njem
Chọọchị gbara ọchịchịrị nke okpokoro isi 40.000
Maria José Roldan | | Getaways Europe, General, Nkechi, Czech Republic
Ndị mmadụ na-achọkarị ịga ebe ndị na-adịghị ahụkebe ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala ịmara ha ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịga leta ha. Na Spain na gburugburu ụwa enweghị ụkọ ebe ndị ọzọ, ụdị nke mgbe ha gwara gị maka ha ị ga-enweta ọgazị, ị nwedịrị ike ịnwụ nrọ naanị na-ege ụfọdụ akụkọ. Fọdụ, ndị na-akpali akpali karị, abụghị naanị na akụkọ ebe ndị a zuru, mana ha na-achọ ụzọ ha ga-esi gaa leta ha wee hụ n'onwe ha, ọ bụrụ na akụkọ niile ha na-akọ bụ eziokwu ma ọ bụ na ọ bụghị.
Taa achọrọ m ịgwa gị banyere otu n'ime ebe ndị a nwere ike ịchọta gburugburu ụwa mana ọ bụghị mmadụ niile na-anwa anwa chọọ ụgbọ elu dị ọnụ ala iji mara ya. Taa achọrọ m ịgwa gị gbasara theka nke okpokoro isi 40.000, ma ọ bụ ozu 40.000. Ee ee, ọ dị ka ihe gbara ọchịchịrị ma dị njọ ka ọ na-ada.
1 Na Czech Republic
2 Okpokoro isi 40.000
3 Akụkọ banyere ịchọ mma
4 Churchka nke 40.000 skull
4.1 Image gallery Churchka nke 40.000 skulls
Ọ bụrụ n ’otu ụbọchị ịchọrọ ileta Churchka a dị egwu, ị ga - aga kilomita iri itoolu site na Prague, na Czech Republic. Ga-aga Sedlec nke bụ mpaghara dịpụrụ adịpụ nke obodo Kutna Hora.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị ebe kachasị mma n’ụwa maka njem, ọ bụ ebe ị ga-aga ma ọ bụrụ n ’ịchọrọ ileta ụlọ ụka a pụrụ iche na ụwa niile --andịkwa ihe ọjọọ niile.
Okpokoro isi 40.000
Churchka a nwere ihe na-erughị okpokoro isi 40.000 nke na-egosi ndị ọbịa ya nso ọnwụ. Echela na ha bụ okpokoro isi ụgha, n’ihi na ha bụ okpokoro isi nke ozu 40.000, ya bụ, ha bụ ezigbo ọkpụkpụ mmadụ. Ọkpụkpụ na okpokoro isi ahụ bụ otu ụbọchị ndị bi n’ụwa anyị ma nwee ndụ nke ha.
Ihe ndi mmadu a bu nke ndi si mba di iche iche, dika Pol, German, Czechs, Belgium and Dutch. N'ezie, ruo taa ị gaghị ama onye okpokoro isi ọ bụla bụ nke o yikarịrị ka ụmụ ha amaghị, ọbụlagodi na ha gara ileta ụka a gbara ọchịchịrị.
Akụkọ banyere ịchọ mma
Ọ bụ ezie na ha na-ekwu maka akụkọ ọdịbendị, ọ dịghị onye maara ma ọ bụ ezigbo akụkọ, ọ bụ ezie na n'ezie ... nkọwa ụfọdụ ga-enwerịrị ihe ịchọ mma dị egwu maka ụka dị otu a na nzukọ ọjọọ na ụwa niile.
Akụkọ a laghachiri n’afọ 1.142 mgbe otu onye a ma ama nọ n’etiti njem ọ na-eme site na Prague gaa Moravia, kwụsịrị izu ike n’akụkụ ọhịa n’ihi na ike gwụrụ ya na ọ nweghị ike ịga n’ihu njem ya ma ọ bụrụ na ọ kwụsịghị. ebe ụfọdụ.
Ike ọgwụgwụ ya dị ukwuu nke na ọ rahụrụ ụra ozugbo, na-abanye omimi miri emi. Na nrọ ya, nnụnụ pụtara n’ihu ya wee banye n’ọnụ ya wee nye ya echiche ịmalitere ebe obibi ndị mọnk n’ebe ahụ ọ na-ezu ike. Mgbe nwoke ahụ a tetara ụra, nwoke ahụ gere ntị na nrọ ya wee kpọtụrụ ndị mọnk nke iwu Cistercian nke Waldassen, na Bavaria ka nrọ ya wee mezuo - n'ụzọ nkịtị.
Ọ bụ n’afọ 1278, e zigara Abbot nke ebe obibi ndị mọnk ahụ, Jindrich, na Ala Nsọ site na ebe esi weta ala site na Golgotha ​​iji gbasasịa ebe a na-eli ozu. N'ihi ya, e lere ya anya na ebe a dị nsọ na onye ọ bụla zuru ike mgbe ọ nwụsịrị ga-aga eluigwe.
Ma mgbe e mesịrị, ọrịa oji ahụ malitere na mmalite narị afọ nke 30.000 mere ka ihe karịrị mmadụ 500 nwụọ, na narị afọ nke XNUMX kwa, ụfọdụ ndị mọnk XNUMX nwụrụ n'ime ebe obibi ndị mọnk ahụ. n’ihi agha ndị Hussite. N'ụzọ dị otú a, olili n'ebe a mụbara nke ukwuu, wee nwee oge mgbe a na-enweghịzi ike ili ebe a dị nsọ n'ihi na ọtụtụ ozu na ha enweghị ike ịnagide ya.
Ọ bụ mgbe ahụ ka a malitere iji ọkpụkpụ nke ndị e liri ka ọ nọrọ ebe ahụ, ya bụ, na theka, ma na nke a ihe ha jiri wee chọọ ebe ahụ mma. N’agbanyeghi na ochicho a bu bit macabre, obu uzo mmadu nile ndi liri na ebe anakoro ulo uka, ga-aga n’ihu, n’agbanyeghi na-elighi ha, n’otu ebe e liri ha n’oge ahu.
Churchka nke 40.000 skull
Taa, ụlọ ụka ahụ nwere ụlọ ụka abụọ, nke dị ala nke a maara dị ka 'ili na nlekọta' na nke elu nke a maara ma kpọọ 'doro anya na ikuku', na-anọchi anya ike nke ìhè ebighi ebi. Chọọchị nke okpokoro isi 40.000 ghere oghe maka ọha na eze ma ha na-eme kwa ụbọchị ma e wezụga ụbọchị ndị nsọ niile, nke anaghị asọpụrụ ndị nwụrụ anwụ niile nọ ebe ahụ.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ibụ n’ọchịchịrị gbara ọchịchịrị a mana nke ị nwere ike nweela isi maka ịma mma ya - ọ nweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na ndị ogbu mmadụ ma ọ bụ ụlọ ụka ndị gburu ndị mmadụ ka ha chọọ mgbidi ha mma, - ị nwere ike ileba anya na ihe gbara ọchịchịrị, ọ bụkwa oriọna ndị ahụ dịnụ.
Ndị nwụrụ n’oge ha enweghị ike iche n’echiche na ọkpụkpụ ha ga-emesị bụrụ isi ihe dị n’ịchọ chọọ ụka mma, ma ọ bụ n’ekpere ma ọ bụ n’elu ụlọ nke yiri oriọna. A na-ejikwa ọkpụkpụ ọkpụkpụ mepụta ihe osise, jiri ihe okike kee ihe.
Y’oburu na ibu onye kwenyere n’akuko paranormal, chee na enwere ghost 40.000 n’elu mgbidi nke Nzuko a ka owe soro okpukpu gi, mana kedu nkpuru obi ichoro no n’akuku otutu puku okpukpu? O doro anya na Chọọchị, na mgbakwunye na ndị mmadụ na-eleta ya ma ọ bụ na-eme Mass n'ime, naanị ihe ị nwere ike ịchọta bụ ịgbachi nkịtị, udo na karịa ... ọkpụkpụ mmadụ. Ee n'ezie, Echeghị m na ọ bụ ezigbo ebe ịgba alụkwaghịm ma ọ bụ mmemme okpukpe ụfọdụ, n'ihi na ọbụlagodi na ọ bụ ụka nwere mmemme a na-eme kwa ụbọchị, onye ga-achọ ime mmemme na ndụ ha n'otu ebe dịka nke a? Enwere ike ịse ihe nkiri na-atụ egwu agaghị adị njọ, mana ọ bụghị maka ihe ọ bụla. Kedu ihe ị chere banyere ebe a na-adịghị ahụkebe?
Image gallery Churchka nke 40.000 skulls
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Czech Republic » Chọọchị gbara ọchịchịrị nke okpokoro isi 40.000
Anyị ga-aga otu otu n'oge opupu ihe ubi a, m ga-enwe mmasị ma ọ bụrụ na ị gwa m usoro oge ụgbọ oloko a ga-esi na Prague ma ọ bụrụ na ọ dị nso ọdụ ọdụ obodo a.
Nzaghachi nye ebube
Naanị m na-eche onye ga-alụ di na chọọchị ahụ na Halloween
Bologna, a ije site na obodo nke ihe ọmụma
Knowingmara nkuku Dubrovnik, pealu nke Adriatic